Kooxda Barcelona oo qaboojisay xiisihii ay u qabtay Aubameyang & Laacibka ay awoodeeda isugu geynayso oo la ogaaday | Somali football world
Home SOOMAALI Kooxda Barcelona oo qaboojisay xiisihii ay u qabtay Aubameyang & Laacibka ay...
(Barcelona) 25 Mar 2020. Sida ay warinayso Jariiradda Star Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qaboojisay xiisihii ay u qabtay Pierre-Emerick Aubameyang, iyadoo la shaaciyey laacibka ay awoodeeda isugu geynayso inay la soo wareegto.
Barcelona ayaa hadda hoos u dhigtay oo qaboojisay xiisihii ay u haysatay Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana hadda ay isku diyaarinaysaa inay awoodeeda isugu geyso Lautaro Martinez suuqa xagaagan.
Weeraryahanka kooxda Arsenal ee Aubameyang ayaa ku jira liisaska xiddigaha ay doonayaan kooxo badan oo Yurub ah; laakiin Jariiradda Daily Star ayaa ku warramaysa in Barcelona ay diiradda saareyso xiisaha ay u heyso weeraryahanka qaab ciyaareedka fiican ku jira ee kooxda Inter Milan, Martinez.
Gunners ayaa laga yaabaa inay lacag kaash ku hesho xiddigooda, iyadoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga 2021-ka, halka Barcelona ay hoos u dhigeyso xiisaha ay u qabto, waxaana soo kordhaya dalab kale oo la sheegayo inuu laacibkan kaga imaanayo Kooxda Manchester United.
Warbixinta ayaa faah-faahin ka bixinaysa sida ay Arsenal u dareensan tahay inay Barcelona isku dayayso inay qalqal geliso weeraryahanka reer Gabon, iyadoo la la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo La Liga ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
Aubameyang ayaa ku adkeystay inuu ku faraxsan yahay woqooyiga Magaalada London, laakiin 30-sano jirka ayaan weli u hibeynaynin qandaraas cusub, kooxda ayaana laga yaabaa inuu isaga dhaqaaqo, halkii ay ka arki laheyd isagoo raacaya raadka Aaron Ramsey oo si xor ah uga tagaya.
Arsenal ayaa siisay kooxda Borussia Dortmund lacag rikoor ah oo ah rikoor ah 56 milyan oo gini oo ay uga soo qaadatay xiddigan heerka caalami ee dalka Gabon bishii Janaayo 2018.
Next articleZlatan Ibrahimovic Oo Noqonaya Wakiil Ciyaartoyda & Kooxaha U Dhexeeya Iyo Shaqsiga Caanka Ah Ee Ay Wada Shaqaysanayaan Oo La Shaaciyey